Sarin'ny atin'ny orinasa Apple any Irlandy | Avy amin'ny mac aho
The Cupertino Boys nanokatra ny varavaran'ny trano fiasan'izy ireo tao Cork, Irlandy mankany amin'ny mpanao gazety eo an-toerana amin'ny fizahana marketing somary tsy ampoizina. Matetika i Apple dia tsy mamela ny fidirana amin'ny haino aman-jery amin'ny fotodrafitrasa misy azy ireo na dia eo am-pananganana azy ireo aza izy ireo, na dia marina aza fa manana ohatra teo aloha isika rehefa tamin'ny taona lasa NBC nahavita nanao tafatafa manokana niaraka tamin'i Lisa Jackson, tao anatin'ny foibem-pikoran'ny North Carolina. Ity ozinina malaza any Cork ity, nosokafan'i Steve Jobs sy Mike Markkula ny tenany tamin'ny taona 1980, dia toerana anaovana ny iMac ho an'i Eropa ary koa avy eo manome fanampiana ara-teknika ho an'ireo mpampiasa.
Ireo sary azo avy amin'ny atin'ny orinasa dia somary zara raha misy, fa vao sambany no nahazoana alalana ny sary avy ao anatiny ary zavatra antenainay fa haverina amin'ny orinasa hafa ao amin'ny orinasa hahalala azy ireo bebe kokoa. Ity ny galeriana:
Ity orinasa ity izao manana mpiasa 4.000 olona ary an'i Apple ilay trano, andao handeha tsy hofan-trano izy ireo. Ankehitriny i Apple dia antenaina hampiakatra ny fisiany ao amin'ny firenena miaraka amin'ny ivon-toerana vaovao izay handanian'ny orinasa 850 tapitrisa euro eo ho eo ary hamokatra asa vaovao 1oo eo ho eo. Andininy manan-danja iray hafa dia ny nanofanan'ny zazalahy Cupertino tranobe roa hafa tao County Cork ary hampitombo ny habak'izy ireo roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Miditra amin'ny orinasa Apple any Irlandy izahay
Ahoana no hamahana ny olana amin'ny Apple TV lavitra anao